”HOT NEWS” कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै प्रहरी चेकपोस्टमा आक्रमण – Sandesh Munch
”HOT NEWS” कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै प्रहरी चेकपोस्टमा आक्रमण
June 25, 2020 247
पोखरा — आफ्नो वडामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै पोखरा महानगरपालिका–३२ का स्थानीयले बिहीबार प्रहरी चेकपोस्टमा आक्रमण गरेका छन् । उक्त वडाको मजुवामा रहेको सातपत्रे घाटमा शव गाडिएको विरोधमा स्थानीयले कास्की र तनहुँको सीमामा राखिएको अस्थायी प्रहरी चेक पोस्टमा आक्रमण गरेका हुन् ।
आक्रोशित भीडलाई तितरबितर गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले ८ राउन्ड हवाई फायर गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जीवन श्रेष्ठले चेकपोस्टमा ढुंगामुढा भएपछि हवाई फायर गर्नुपरेको बताए । ढुंगामुढा गर्ने ८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
टायर बालेर बाटो छेकेपछि प्रहरीले हटाउन खोज्दा झडप भएको थियो । झडपमा २ प्रहरी र केही स्थानीय घाइते भएका छन् । तीनवटा मोटरसाइकलमा क्षति भएको छ । घाइतेको अवस्था सामान्य छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको टोलीले अवरोध हटाएपछि सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको थियो । घाटमा पुग्ने बाटो छेक्ने स्थानीयको टोलीले नै चेकपोस्टमा आक्रमण गरेको एसपी श्रेष्ठले बताए । यसअघि पनि स्थानीयले शववाहनमा शव बोकेर गएका सेना र प्रहरीको टोलीलाई अवरोध पुर्‍याएका थिए ।
स्याङ्जाका ५५ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आईसीयूमा उपचारका क्रममा बुधबार राति मृत्यु भएको थियो ।
यसअघि पनि दुई साताअघि कोरोना संक्रमणबाटै निधन भएका स्याङ्जाका एक पुरुषको शव व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पोखरा–११ फूलबारी र पोखरा-२० भलामका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएका थिए ।
स्याङ्जाका ५५ वर्षीय कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु
Nextबोलचाल नभएका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँसभामा दुईतिर फर्किएपछि…
यस्तो दाग देखिए बोक्सिले चुसेको भन्ने भ्रममा हुनु हुन्छ ? यस्ता हुन सक्छन् कारणहरु
यसकारण गर्भवती र सुत्केरीले व्रत बस्नु हुन्न, चिकित्सकले दिए यस्तो सुझाव
जतिसुकै बिजि भएपनी केवल २ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला, तपाइँको जिवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ !
सागसब्जी केलाउने, पखाल्ने, भाडावर्तन सफा गर्ने, चिया पकाउने जस्ता कामले उनीहरुले व्यवहारिक ज्ञान आर्जन गर्छन् । यसबाट उनीहरुले आफ्नो काम आफै गर्न सिक्छन्, शारीरिक रुपमा सक्रिय हुन्छन्, मौसमी सागसब्जीको गुण एवं स्वाद जान्न सक्छन्, पाककला सिक्छन्, खानेकुरा र पोषणबारे जानकारी पाउँछन् ।